पर्जा पट्टा भर्सेस स्थायी समाधान : ममताको कठपुतली भएर अमरसिंह राईले जातिको उत्थान गर्छु भन्नु एकदमै हास्यास्पद - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारपर्जा पट्टा भर्सेस स्थायी समाधान : ममताको कठपुतली भएर अमरसिंह राईले जातिको उत्थान गर्छु भन्नु एकदमै हास्यास्पद
April 11, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
यसपालीको लोकसभा चुनाव तृणमूल काङ्ग्रेसको पर्जा पट्टा भर्सेस भाजपाको स्थायी समाधान बिचको चुनाव हो। प्रिय पाठकवृन्द तपाईहरू के चाहनुहुन्छ? केही दिनलाई खुशी हुने पर्जा पट्टा चाहनुहुन्छ कि आफ्नो भावी पीढ़ीको निम्ति सुरक्षित रहने दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सको स्थायी समाधान चाहनुहुन्छ? अब निर्णय तपाईको हातमा छ। एकपट्टि हामी पहाड़वासीको निम्ति बिखफूल छ त अर्कोतिर सम्पूर्ण देशवासीकै निम्ति राष्ट्रीय फूल कमल छ – छान्ने काम तपाई र हाम्रो। हाम्रो निर्णय यस्तो होस् – जहाँ जातिको जित होस् – हाम्रो जाति सँधै हाँसिरहोस्।
अहिले लोकसभा चुनाव हाम्रो मुखमा नै आएको छ। यस लोकसभा चुनावमा विभिन्न पार्टीहरू विभिन्न मुद्दाहरू बोकेर चुनावी मैदानमा छन्। दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सको राजनीतिमा सबैभन्दा हावी रहेको मुद्दा हो – छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको विरूद्धमा उठेको बड़े से बड़े राजनैतिक दलहरूले अहिलेसम्म धुलो चाटिसकेको छ – गोर्खाल्याण्डको विरूद्धमा खड़ा भएको मैं हुँ भन्ने खुँखार हस्तिहरूले पनि शीर निहुराउनु परेको इतिहास छ।
बिनय तामाङ – अनित थापा समुह अनि तृणमूल प्रार्थी अमरसिंह राईको चुनावी मुद्दा पर्जा पट्टा रहेछ जो एकदमै असान्दर्भिक छ। कारण, पर्जा पट्टाको निम्ति बोल्ने ठाँउ विधानसभा हो – अमर सिंह राई विधायक हुँदा पर्जा पट्टाको विषयमा विधानसभामा एक शब्द बोलेनन्। अहिले आएर अमर सिंह राईले कुन मुखले संसदमा पर्जा पट्टाको निम्ति काम गर्छु भन्दैछ?
जो कि संसद पर्जा पट्टाको विषय लिएर बोल्ने ठाँउ नै होइन। जनताले यो कुरा बुझ्नु जरूरी छ। ममताको कठपुतली भएर अमरसिंह राईले जातिको उत्थान गर्छु भन्नु एकदमै हास्यास्पद छ।
अब कुरा गरौं भाजपाको चुनाव घोषणा पत्रको – भाजपाको चुनाव घोषणा पत्रमा गोर्खा जातिको निम्ति दुईवटा मुख्य बुँदाहरू समावेश गरिएको छ। हुन त हामी गोर्खाहरू यहि देशको नागरिक हौं यसैले भाजपाको घोषणा पत्रमा देश हितको निम्ति समावेश गरिएको बुँदाहरू हाम्रो निम्ति पनि धेरै महत्वपूर्ण छ।
यद्यपि, भाजपाले हामी गोर्खाली समुदायलाई विशिष्ट स्थान दिएर ती दुईवटा बुँदाहरू समावेश गर्नु भनेको हाम्रो निम्ति शुभ सङ्केत हो – गोर्खा जातिको निम्ति समावेश गरिएको यी बुँदाहरू 2009 सालदेखि गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरूङले निभाएको गठबन्धन धर्मको फल हो भन्दा कुनै आपत्ति नहोला।
भाजपाको चुनाव घोषणा पत्रमा समावेश भएको दुई वटा मुख्य बुँदाहरू मध्ये एउटा हो – एघार गोर्खा जातिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नु। हुन त जनजातिको मुद्दा यो संसदीय सत्रमा नै फत्ते हुन लागेको मुद्दा हो तर कतिपय तकनिकी कारणहरूले यो सम्भव भएन यसर्थ भाजपाको सरकार आएको खण्डमा यो सजिलै पुरा हुने कुरामा जनता निर्धक्क बस्दा हुन्छ।
भाजपाको घोषणा पत्रमा समावेश भएको अर्को मुख्य बुँदा हो – दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सको समस्याको स्थायी समाधान। दार्जीलिङ पहाड़ तराई डुवर्सको जनताले चाहिरहेको स्थायी समाधान के हो त? प्रत्येक जनतालाई प्रश्न गर्दा त्यो थाह भइहाल्ने कुरा हो। यहाँको जनताले दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सको स्थायी समाधानको रूपमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नभए कम से कम केन्द्र शासित राज्य चाहन्छ – हो कि होइन तपाईहरू आफै भन्नुहोस् त?
यसैले यसपालीको लोकसभा चुनाव तृणमूल काङ्ग्रेसको पर्जा पट्टा भर्सेस भाजपाको स्थायी समाधान बिचको चुनाव हो। प्रिय पाठकवृन्द तपाईहरू के चाहनुहुन्छ? केही दिनलाई खुशी हुने पर्जा पट्टा चाहनुहुन्छ कि आफ्नो भावी पीढ़ीको निम्ति सुरक्षित रहने दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सको स्थायी समाधान चाहनुहुन्छ? अब निर्णय तपाईको हातमा छ। एकपट्टि हामी पहाड़वासीको निम्ति बिखफूल छ त अर्कोतिर सम्पूर्ण देशवासीकै निम्ति राष्ट्रीय फूल कमल छ – छान्ने काम तपाई र हाम्रो। हाम्रो निर्णय यस्तो होस् – जहाँ जातिको जित होस् – हाम्रो जाति सँधै हाँसिरहोस्।
आलोचना सहन नसकेपछि ममताले लगाइन् फिल्ममा प्रतिबन्ध : सर्वोच्चले हान्यो ममतालाई बाँस